Conference Urges Myanmar Businesses to Scale Up, Reskill Workforce | Myanmar Business Today
Home Investment & Finance Conference Urges Myanmar Businesses to Scale Up, Reskill Workforce
Conference Urges Myanmar Businesses to Scale Up, Reskill Workforce
Businesses need to developascaling-up strategy and reskill their workforce in order to succeed in today’s global marketplace, according to speakers atarecent conference titled “Scaling Your Business: Grow-Connect-Leverage Business Success”.
Organized by Bangkok-based executive, leadership and innovation education center SEAC (Southeast Asia Center), the November 15 event at the Melia Yangon Hotel was attended by more than 400 local business leaders from top companies across various industries.
“Businesses in Myanmar are facingamyriad of challenges. Even when many businesses have been growing, they have also reached the stage where growth may not be enough,” said SEAC’s Chief Capability Officer and Managing Director Arinya Talerngsri and Chief Learning Architect James R. Engel during the opening ceremony.
Growth depicts howabusiness expands in size butascaling strategy stimulates business to gain revenue by being more effective while using minimal resources, according to Talerngsri and Engel.
The conference featured sessions on business agility, design thinking, reskilling asaway to develop talents and mindset and culture as well asapanel discussion with top executives from Thai companies in different sectors and industries.
The key message from all speakers at the event was that people are the key driving force for business success. To stay relevant in today’s global environment, business organizations need to ensure that their people never stop learning new skills and knowledge.
A lifelong learning center, SEAC offers development solutions that can be customized to serve organizations’ different needs, including to ensure the ability to upskill and reskill their workforce.
အာဆီယံ၏ ဖန်တီးမှုနှင့် လမ်းညွှန်မှုအ ကောင်းဆုံး ရာသက်ပန်သင်ကြားရေးစင်တာ တစ်ခုဖြစ်သည့်ှနဗဃ ၏အရှေ့တောင် အာရှစင်တာက လုပ်ငန်းများစီမံရာတွင်တိုး တက်လာရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၁၅ တွင် နြူငေ့ညေါသည ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် (၄ဝဝ)ကျော်တက်ရောက်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါပွဲတွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ စီးပွားရေးလုပ် ငန်းရှင်များက ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းအရည် အသွေးပြည့်မီရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပုံများနှင့် မတူညီသည့်စီးပွားရေးကဏ္ဍများတွင် လျင် မြန်စွာတိုးတက်ရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံများကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ယင်းဆွေးနွေးပွဲကို ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် ှနဗဃ အဖွဲ့၏ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ဒါရိုက်တာအဖြစ် ြျ.ဗမငညပေ ွှေူနမညါျမင နှင့် သင်ကြားရေးအနုပညာ အကြီးအကဲအဖြစ် မြ. ဲောနျ ျွ.နညါနူ တို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ကြုံနေရသည့် စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲများကို စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါက လုပ်ငန်းခွင် ကျယ်ပြန့်လာမည့်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ သည်။ စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းပညာများဖြင့် လျင် မြန်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ချက်များ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ြျ.ဗမငညပေ ွှေူနမညါျမင က ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို မြင့်တင် ပေးရန် လုပ်ဆောင်ရမည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖြေရှင်းချက် (၇) ခုရှိပြီး စိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ခြင်း၊ ပါဝင်သည့်တစ်ဦးချင်းစီ တွက်ချက်လုပ်ကိုင် နိုင်ရန်နှင့် တက်ြ<ွကစွာလုပ်ဆောင်ခွင့်ပေး ခြင်း၊ ပထမဦးဆုံးဦးဆောင်မှု၊ အရည်အသွေး ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်ထားရှိခြင်း ၊ခေတ်နှင့်အညီပြောင်းလဲနိုင်သည့် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည့် ခေါင်းဆောင်ဖြစ် ရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ် ကြောင်း အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ ဖြေရှင်းချက်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် သူတို့၏အရည်အသွေးများသည် ပိုမို ကောင်းမွန်သည့်အနာဂတ်ကို ဦးဆောင် ရန်နှင့် အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းကို ပြန်လည်ဖော်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထား သည်။
Previous articleHitachi SEM Wins $10 Million Government Order for Distribution Transformers
Next articleZealax Hotel & Residence to Open January 1